Edere site Tranquillus | Jul 11, 2018 | Ngwakọta ịntanetị
Weelearn bụ usoro ihe omimi vidio n'isiokwu ọ bụla metụtara ntụrụndụ onwe onye, ​​ọdịmma, nkà mmụta uche na agụmakwụkwọ.
Ihe e kere eke nke usoro Weelearn
N’afọ 2010, Ludovic Chartouni bidoro ịgụ akwụkwọ gbasara mmepe. N'ịbụ onye agụụ onwe ya na-amasị, ọ na-enwe mmasị na akwụkwọ karịsịa "Ibi ndụ obi ụtọ: nkà mmụta uche nke obi ụtọ" nke Christophe André dere.
N'otu oge ahụ, mgbe ọ hụrụ mgbasa ozi nke vidio na Intanet, o kpebiri ijikọta ọgaranya na usoro nke akwụkwọ ahụ na mmetụta nke vidiyo. Nke a bụ otú o si emepụta na Paris (na XVe na-agbanye ihe nkedo Weelearn nke nwere nsogbu abuo: otu esi eme ka ndi mmadu mepee onwe ha n'uwa? Kedu otu esi eme ka ndị ọkachamara kachasị mma mepụta vidiyo ọzụzụ?
Afọ anọ ka e mesịrị, Ludovic Chartouni nwere obi ụtọ na ọ ga-enwe ihe ịma aka ya ma gụọ Boris Cyrulnik ma ọ bụ Jacques Salomé n'etiti ndị ya na ha jikọtara ya.
Nanị ihe mgbaru ọsọ ya bụ: ime ka ndụ ndị ahịa ya dịkwuo mma!
Ụkpụrụ nke Weelearn
Iji mebie ọrụ mmepe onwe onye, ​​ị ghaghị ịchọta echiche ọhụrụ, n'ihi na e nwere ọtụtụ ebe na-emetụta isiokwu a. Iji nwee ihe ịga nke ọma, ị ghaghị ịchọta ụzọ mbido agha. Nke a bụ otú echiche ahụ si jikọta ọgaranya nke akwụkwọ na mmetụta nke vidiyo.
N'okọta zuru oke nke ọzụzụ ntanetị na nkuzi nke ụdị nile, ọ dị mkpa ịchọta ụzọ na-achọ ndị ahịa. Nhọrọ ahọrọ ahọpụtara bụ ịnye ọhụụ ọzụzụ ọ bụla na mpaghara nke ọdịmma, mmepe onwe onye na nkà mmụta uche na ihe atọ dị mkpa:
Chọpụta ndị ọkachamara kachasị mma n'ọhịa ha,
Nye ya vidiyo nke ọkachamara
yiputa vidiyo vidio a, akwadoro na akwukwo nta ndi ozo.
Ole ndị bụ ndị nkụzi Weelearn?
Nye onye obula! Onye ọ bụla nke chọrọ ịkwalite ndụ ha kwa ụbọchị ma nwee obi ụtọ karị!
Ngwurugwu ọzụzụ nke Weelearn nwere ike ịmasị onye ọ bụla, nke ọgbọ ọ bụla na site na ụdị ndụ ọ bụla. N'etiti ọtụtụ isiokwu a na-emeso, ọ dị onye ọ bụla na onye ọ bụla mkpa.
A haziri vidio ndị ahụ n’ụzọ ga-eru onye ọ bụla aka. Ọ bụrụ n’ezie ndị ọkachamara - onye ọ bụla n’ubi ya - ndị na-etinye aka, a chọrọ ha iji asụsụ a pụrụ ịghọta aghọta nye ndị na-amaghị ihe. A machibidoro jargon a kapịrị ọnụ.
GỤỌ Smartnskilled: saịtị ọzụzụ n'ịntanetị na-egbo mkpa niile
Anyị na-ejikwa vidiyo ọzụzụ nke Weelearn na ụlọ ọrụ ndị nwere ike ịzụ ndị ọrụ ha na obere ma ọ bụ karịa. Ụlọ ọrụ ndị na-arịwanye elu achọpụtala na mmepe onwe onye, ​​ọdịmma ma ọ bụ nkà mmụta uche abụghị isiokwu na-akwụsị n'ọnụ ụzọ ha, mana na ha bụ nsogbu ndị na-emetụta ha. Onye ọrụ obi ụtọ bụ onye ọrụ ọtụtụ ihe na-arụpụta. Ụfọdụ ụlọ ọrụ na-ahọrọ inye ọzụzụ ndị ọrụ ha iji nyere ha aka imeri nsogbu dị iche iche, ụfọdụ n'ime ha na-emetụta nrụgide nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ndị na-ahụ maka ya bụ ndị ọkachamara n'ọhịa ha ma mara ndị ọgbọ ha. A na-ahụ ha na vidio vidiyo n'ihi na a na-eji ha ekwu okwu n'ihu ọha ma na-agwa ndị novices okwu. Ha maara otú e si eme ihe ngosi iji duzie ndị na-ege ha ntị ma, ọ bụrụ na a họpụtara ha, ọ bụ maka ihe ọmụma ha, nkà ha, kamakwa maka ikike ha nwere ịkọwa isiokwu ha.
Nhọrọ nke ndị dere nwere ọtụtụ ihe na-eme na ihe ịga nke ọma Weelearn. Onye o guzobere, Ludovic Chartouni, maara nke a ma na-achọ mgbe niile ndị ọkà okwu ọhụrụ bụ ndị ama na nkà ha ga-eme ka vidiyo ya nwee ihe ịga nke ọma.
Kedu ihe dị n'ime vidiyo nke Weelearn?
Vidio ahụ na-enye ụzọ ọhụụ maka isiokwu ọ bụla ha na-ekpuchi. A na-edozi ha ma bee n'ime obere modulu iji doo anya ma dị mfe igwu. Maka ọzụzụ ọ bụla, Weelearn na-eji ndị ọkachamara mara ọkwa na ndị ọkà okwu na mpaghara ha.
Ịghọta vidio ahụ dị ike iji kpalie mmasị na ịchekwa ihe nkiri ya. Ụda, eserese na ederede na-agwakọta iji nweta nsonaazụ mara mma ma na-adọrọ mmasị. Vidio jikọtara mmetụta nke ihe oyiyi na usoro nke akwụkwọ ahụ. Mpempe akwụkwọ ederede na vidiyo na-abia mgbe nile cheta isi ihe dị mkpa nke onye edemede dere.
Nbudata vidiyo ọ bụla nwere nyocha, ihe enyemaka anya ... maka mmụta bara uru.
Agụmakwụkwọ ọzụzụ nke Weelearn
Uzo ahụ zuru okè ma na-achọta ya. Na mgbakwunye na nyocha ọchụchọ ahụ, ị ​​nwere nchịkọta nhọrọ na-enye gị usoro ọzụzụ, ya bụ:
Mmụta na ezinụlọ,
Mmepe onwe onye,
Ndụ na nzukọ bara uru,
Di na nwunye,
Ahụike na ọdịmma.
GỤỌ Tuto.com: N'uzi Na Nzuzi Na-eme Ka Ịmụta N'uzi Na Nzuzi.
Site na ịga na isiokwu ọ bụla, ị ga-ahụ ihe ọmụmụ dị iche iche metụtara.
Ihe nke ọzụzụ
Site na ịpị na tab nke vidiyo ị nwere mmasị, ị ga-enweta ihe niile gbasara ọzụzụ:
Nkọwa zuru ezu,
Okwu banyere onye dere ya,
Ihe si na vidiyo,
Nchịkọta ya na isiokwu nke usoro ọ bụla,
Echiche nke ndị na-elele ọzụzụ ahụ,
Ihe ngosi iji mee ka ị mara ma ọ bụrụ na ọzụzụ a na-enye akwụkwọ nta, agbata, quizzes ...
Nke a na-enye gị ihe doro anya nke ihe ị na-azụ.
Ị ga-ahụ na ala nke ọzụzụ nkuzi nke na-amasị gị nhọrọ nke vidiyo ndị ọzọ yiri nke nwere ike ịmasị gị.
Vidio mgbasa ozi na mpụga ikpo okwu
Ebe mgbaru ọsọ Weelearn bụ iji ruo ndị na-ege ntị ka ukwuu, ndị vidiyo ya dị na nkwonkwo nke ndị mmekọ ha, Groupon na-akwalite ọzụzụ ya na ụwa French.
Tụkwasị na nke a, a na-eme ka mgbasa ozi telivishọn hụ na ọwa nke Free Box na Orange.
Nnukwu ụlọ ọrụ na-enweta ụfọdụ ọzụzụ nkuzi Weelearn, tinyere Bouygues Telecom na Orange, iji kpọọ aha naanị ndị a ma ama.
Ọnụ ọgụgụ Weelearn
Weelearn.com na-enye klas nke ihe karịrị otu narị ụzọ, na mmalite nke evolushọn. Maka 19,90 €, ị na-azụta otu n'ime vidio ndị a nke si na 1h gaa na 2h30. Ozugbo ha nwetara, ha nwere ike ịnweta ngwa ngwa na-enweghị egwu na kọmputa (Mac ma ọ bụ PC), mbadamba na smartphone.
Otú ọ dị, ọ gaghị ekwe omume ibudata ha ma enweghị nkwado dijitalụ, CD ma ọ bụ igodo USB ga-enye.
Weelearn na-enye gị atụmatụ abụọ aha na-akparaghị ókè. Ị nwere ike ịnweta ọmụmụ ihe niile, mara na ọ na-agbakwụnye kwa ọnwa. Nmeghari ohuru bu akpaka, ma ndenye aha abughi ndi ejidere ya, ya na otu click ị nwere ike ịhọrọ kagbuo ndenye aha gị.
Ndenye a na-akparaghị ókè maka otu ọnwa bụ 14,90 € na afọ zuru ezu, na 9,90 € kwa ọnwa. Ị nwere ike ịhọrọ vidiyo pụrụ iche nke mbụ iji nwaa ọrụ a, ma ọ bụrụ na ịchọrọ mmasị, site na nke abụọ, ndebanye aha ọnwa ahụ adịworị nnọọ mmasị.
Kedu ọdịnihu maka Weelearn?
Ndị na-ege ntị nke Weelearn na-eto eto. Ndị ọrụ na-adọta mmasị n'otu isiokwu na-amasị ma na-echegbu ha. Ebumnuche a, ha na-ahọrọ usoro ndị ọzọ ma na-eguzosi ike n'ihe na ikpo okwu.
Ọ bụ ya mere Weelearn na-achọ iji zụlite ọhụụ ọhụrụ ma gbasaa nkata ọzụzụ ya.
Ma ọ bụrụ na ị ghọọ onye edemede maka Weelearn?
Nke a bụ ihe ikpo okwu na-enye! Mgbe niile na-ele anya maka ihe ọhụrụ na-atọ ụtọ ma na-enye afọ ojuju, Weelearn na-emeghe mgbe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nchịkwa, onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ, onye edemede ma ọ bụ onye ọkachamara n'ọhịa a kapịrị ọnụ, ị nwere ike ịkpọtụrụ ikpo okwu Weelearn onye na-achọ mgbe niile ka ndị mmadụ nwee ike mezue akwụkwọ nkesa ya.
N'ezie, ị ga-ahụ ọnọdụ ụfọdụ. Ị ghaghị inwe nkà dị ike na ahụmahụ bara ọgaranya n'otu mpaghara ma ọ̄ bụ karịa metụtara ahụike, ahụike, mmepe onwe onye, ​​ọkachamara, nkà mmụta mmekọrịta mmadụ na mmadụ ma ọ bụ agụmakwụkwọ. Ị ghaghị ịghachị isiokwu gị ma ghọọ onye ọkachamara a ma ama na mpaghara gị.
Ihe oru gi nile choro ihu oma gi. O nwere ike ịbụ na ị kụziiri ọha na eze, ndị ọkachamara ọkachamara ma ọ bụ dịka akụkụ nke azụmahịa. O nwere ike ịbụ na ụlọ ndị a ma ama mara ya.
Ị ga-enwerịrị ike ịkwado ọzụzụ maka ịhazi ihe niile. Ị ghaghị ịma otú ị ga-esi agwa ndị na-ege ntị okwu na-amaghị isiokwu gị ma gbasaa okwu gị. Weelearn na-aṅa ntị n'eziokwu ahụ na usoro ya na-amasị onye ọ bụla, n'enweghị ọdịiche.
Ihe niile dị arọ nke CV gị ga-enye gị ohere ikere òkè na njem nke Weelearn. N'ezie, ị ghaghị ịdị na-ekwurịta okwu na igwefoto ma chee ihu na ndị na-ege ntị.
Ọ bụ ya, ị maara ihe niile gbasara Weelearn ma ị nwere ike ịga na saịtị ha iji chọpụta na ha na-ekiri ihe ndị dị na vidio ahụ iji nye gị echiche doro anya banyere ihe ikpo okwu na-enye.
Okwu weelearn: Look-Learn July 14th, 2018Tranquillus
gara agaAtụmatụ maka imeghe akaụntụ akụ na France
-esonụỌrụ kacha mma n'ịntanetị maka iziga nnukwu faịlụ n'enweghị ndebanye aha.
Mee Mmasị Gị Ọrụ na Ọzụzụ Video na Elephorm